Spain oo isku dayeysa in ay noolaadaan la’aanta xidigaha Barcelona kadib markii xalay xulka laga wayay xidig ka tirsan Barca – Gool FM
(Spain) 12 Okt 2018. Tababare Luis Enrique ayaa tan iyo markii uu la wareegay shaqada tababarka xulka Spain wuxuu ku socdaa dar dar xoogan waxaana ay xalayto garaaceen dhigooda Wales kulanka ayaa natiijo ahaan kusoo dhamaaday 4-1 oo ay Spain ku awood sheegteen
Waxa xusid mudan in macalinkii hore Barcelona Luis Enrique uu iska indha tiray xidigaha xulka Spain ee u ciyaara kooxda Barcelona waxaana laga jogaa sida xogtan ay tilmaameyso inta ay ka maqan yihiin 103 kadib markii laga wayay safka hore ee xulka xitaa hal xidig oo Barcelona tirsan.
Sida xogta lagu helay waxa ay aheyd markii ugu dambeysay ee safka hore ee xulka qaranka Spain laga waayo xidig Barca ah kulan ay Spain ay la ciyareen wadanka South Korea kulan dhacay June 1, sandkii 2016, waxaana xiligii macalin u ahaa xulka qaranka tababare Vicente del Bosque.
Xidigahii Barcelona ee kala ah Gerard Pique ,Andres Iniesta ,Carles Puyal,Xavi Sergio Busquets ayaa ahaa kuwa inta badan Spain ay su qeyn ugu tiirsaneed, isla markaana ay kula guuleeysteen tartamo waaweeyn balse hada marka laga reebo Sergio Busquets inta kale waa ay ka fariisteen kubada cagta waana sababta ay Barca ugu yaradeen qaranka .
Ka maqnaashaha kulan caalmi ah xidgaha Baecelona ee qaranka Spain ayaa dib inoogu celineysa 12 October sanadkii 2015, waxaana dhacdadaas laga joogaa Sadax sano marakaas oo Spain wajaheen dhigooda Ukraine, waxana macalinkii xiligaas ee Spain Del Bosque nasiyay xidigaha Bartra, Pique, Alba iyo Busquets, kuwaas oo an ciyaartaasi ka qeeyb qaadan .
Yeelkeede kulankii xalay ee Spain ay guusha raaxada leh ka gaaratay wadanka Wales ayaa laga wayay xidig Barcelona ah in kastoo uu kursiga keeydka soo fariistay Sergio Busquets hadana aan la is ticmaalin adeegiisa waxana is badalka waayaha ay keentay in xidigaha Real Madrid ay noqdan kuwa ku xoogan xulka qaranka Spain isla markaana kaga horeeya kuwa Bareclona.
Raphael Varane oo xaalad jah wareer ah galiyay kooxda Real Madrid, sababa la xiriira….